यस चित्रकला "स्वर्ण शरद" मा लेखन - को पाठ्यक्रम को आवश्यक तत्व
यस चित्रकला "स्वर्ण शरद" मा लेखन, तपाईं आफ्नो चित्रहरु मा अंकित कि दुर्लभ कलाकार को एक चर्चा, चित्रकला को विशेष गरी रूसी स्कूल, साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ वर्ष को अनमोल समय, गाया ए एस Pushkinym छ। यसलाई अझ सही र सुन्दर रूसी शरद ऋतु बारेमा बोल्ने शब्द फेला पार्न असम्भव छ।
रूसी प्रकृति को विशिष्टताको
यो किनभने मात्र हाम्रो देश को क्षेत्र त मधुर स्वर मा, रूसी छ अनित्य रूखहरू यस्तो विविध प्यालेट बनाउँछ जो conifers संग, जसमा वर्तमान र क्रिमसन, सुन र हरियो। "छैन रूस यद्यपि" - क्यानाडा, पनि, रूसी जस्तै अक्षांश मा, रूप अर्को कवि द्वारा प्रमाणित छ, र maples, गिरावट मा विशेष गरी सुन्दर धेरै यसलाई मा छ, तर। हाम्रो देशमा, सायद एक व्यक्ति जो छैन चित्रकला "स्वर्ण शरद" मा स्कूल निबंध मा लेखन हुनेछ। विविध बस शायद, कलाकारहरूको नाम - वी Polenov र Brodsky - केही वर्ष मा इसहाक Levitan र इवान Shishkin, केही मा हुन सक्छ।
वर्ष को यो समय महिमा प्रसिद्ध रूसी कलाकारहरूको सबै चित्रहरू, चिन्न छन्। तिनीहरूले प्रत्येक, यो पहाड वा एउटा सानो जंगल तालाब देखि नदी को एक दृश्य हो कि, हाम्रो देश को vastness महसुस भन्ने तथ्यलाई द्वारा संसारमा कला समान काम फरक, सायद। यो कि चित्रकला "स्वर्ण शरद" को संरचना क्यानभासमा दलदली बैंकहरू एक शान्त वन नदी र crowns एकताबद्ध दुवै पक्ष देखि leaned कि yellowed सन्टी रूखहरू धेरै चित्रण गरिएको जो Yefim Volkov (1844-1920), लेखिएको छैन दुर्भाग्यपूर्ण छ। सुन्दर तस्बिर।
"Lovely समय ..."
रूसी लागि शरद ऋतु परिदृश्य तिनीहरूले तिर्सना evoke छैन भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता - "। enchantment आँखा" ए एस Pushkin शब्दहरू मा, यो भव्य छ तिनीहरूलाई प्रकृति को withering र चित्रकला लेट शरद ऋतु चित्रण गरिएको हुँदा यसको बारेमा केहि भन्दा बढी केही भन्न सक्छौं स्थानीय कलाकारहरूको को चित्रहरु मा सुनको शरद तुलना गर्न सकिन्छ यस pore समर्पित रूसी कवि को सुन्दर कविता र संगीत पेट्रा Ilicha Chaykovskogo "चार मौसम" बाट साथ। तपाईं संगीत मा पूर्वव्यापी शरद ऋतु परिदृश्य हेर्न भने, आनन्द nagging को भावना दर्शक समेट्छ।
गायक रूसी प्रकृति
तस्वीर को असीमित संख्या, गाह्रो सबै भन्दा राम्रो चयन गर्न, तपाईं मात्र व्यक्तिगत ध्यान गर्न सकिन्छ। चित्रकारी "स्वर्ण शरद" Polenov (1844-1927) 1893 मा लेखिएको। एक छिमेकी Bekhovo गाउँ, कलाकार 1890 मा किनेको जो - क्यानभासमा मा एक विशिष्ट स्थान चित्रण गरिएको छ। यो ओका को उच्च बैंक मा स्थित छ। शहर dweller वी Polenov यहाँ रूसी प्रकृति को सुन्दरता गरिन्थ्यो। एक पटक सेप्टेम्बर मा असाधारण सौन्दर्य परिदृश्य उहाँलाई अघि खुलेको छ। सेप्टेम्बर क्यानभासमा मा immortalized, वर्ष को पनि सबैभन्दा सुन्दर समय। Debilitating गर्मी subsided, यो टाढा वर्षा समय, पेड मा सबै पात जस्ताको तस्तै मात्र प्रारम्भिक पहेंलो बारी जो birches छन्, तिनीहरूले रंग परिवर्तन भयो। लगभग स्थिर नदी मा स्पष्ट spectacled पहाड तर्फ छोडेर किनारमा प्रतिबिम्बित। हावा यी चित्रहरू क्रिस्टल भनिन्छ मा अक्सर छ। र यसलाई? छ रूपमा क्षितिज कता हो कता टाढा। बायाँ देखिने छ नदी को मोड्नु, जो मा बालुवा पहेंलो पीला गाढा रूखहरू पृष्ठभूमिमा विरुद्ध। मौनतालाई र अनुग्रह - क्यानभास मा निरपेक्ष आनन्द को पल कब्जा। "सुनको शरद" Polenova हेर्न 77h124 आकार, चित्रकारी खुला हावामा संग्रहालय मा आफ्नो नाम भण्डारण गरिएको छ।
रूस मा गर्व बाल्यकाल देखि सिकाउनुभयो गर्नुपर्छ
यस चित्रकला "स्वर्ण शरद" मा लेखन रूसी कला को masterpieces संग मात्र प्राप्त थाह छैन विद्यार्थीहरू, तर पनि केही तुलना सौन्दर्य यो स्वामित्व को एक अर्थमा बनाउँछ। रचना, हेर्दै दृश्यहरु लागि तयारी, बच्चा रूसी प्रकृति प्रेम मात्र होइन, तर पनि आफ्नो संसारको एक र मात्र सौन्दर्य गर्व महसुस गर्न एक शक्ति थियो जो चित्रकला, कविता, संगीत को प्रतिभा, पराउँछु र पर्यावरण उत्कृष्टता वातावरण प्रसारित र व्यक्त गर्न सिकेका सिक्छन् आफ्नो मातृभूमि प्रेम।
केदारनाथ चित्रकला - प्रविधी, उपकरण, सुविधाहरू
एक फूल केदारनाथ कसरी लेख्न। चार कदम
कसरी आफ्नो शर्ट मा आस्तीन माथि रोल गर्न? विभिन्न तरिकामा
मुख्य उपकरण सामाग्री: प्रकार, ब्रान्ड, गुण, विशेषताहरु, विनिर्माण सामाग्री
Atikmdag.sys - मृत्युको नीलो पर्दा
स्पेनी प्रधानमन्त्री Mariano Rajoy: जीवनी